वीरगञ्ज नाकाबाट ७ महीनामा रू. ३ खर्बको वैदेशिक व्यापार
रू. साढे २ खर्बको आयात हुँदा निर्यात २२ अर्ब
वीरगञ्ज । प्रमुख नाका वीरगञ्जबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ७ महीनामा करीब ३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारबाट चालू आवको माघ महीनासम्ममा २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको भन्सारले बताएको छ ।
वीरगञ्ज नाकाबाट मुख्य रूपमा सवारीसाधन, इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । नेपाल आयल निगमले भित्र्याउने इन्धनमध्ये आधाभन्दा बढी परिमाण यही नाकाबाट आउँछ ।
निगमले वीरगञ्ज नाकाबाट डिजेलमात्रै २७ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको छ । यो अवधिमा ९ अर्ब ८६ करोडको पेट्रोल र ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको एपी ग्यास आयात भएको तथ्यांक वीरगञ्ज भन्सारसित छ ।
अघिल्लो आव २०७६/७७ को तुलनामा यो वर्ष पेट्रोल र ग्यासको आयात भने घटेको छ । कोरोना महामारीका कारण आवको शुरूका २ महीना पूर्ण बन्दाबन्दी र स्वदेशमा विद्युत्को खपत पनि बढेकाले इन्धनको आयात घटेको अनुमान वीरगञ्ज भन्सारका अधिकृत रमेश सुकमनीको छ ।
आवको शुरूका केही महीना डिजेलको आयात पनि घटेको थियो । पछिल्ला महीनाहरूमा माग बढेपछि आयात पनि बढेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो नाकाबाट ७ महीनामा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको जीपकार आयात भएको देखिन्छ । यस वर्ष यस्ता सवारीसाधनको आयात पनि घटेको छ ।
गतवर्षको समीक्षा अवधिमा ५ हजार २१५ ओटा यस्ता साधन भित्रिएकोमा यो वर्ष घटेर ३ हजार ४४९ मा खुम्चिएको छ । सरकारले गाडी आयातमा नीतिगत कडाइ गरेपछि महँगा गाडी आयात नभएको भन्सारले बताएको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले कच्चा पदार्थ यही नाकाबाट भिœयाउँछन् । यहाँ खुलेका फलाम, सिमेन्ट, औषधि, खाद्यान्न र कपडा उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् ।
यो वर्षको ७ महीनामा समग्र आयात अघिल्लो वर्षको सो अवधिको तुलनामा कमी आएको भन्सार अधिकृत सुकमनीले बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा आयातको आकार ७ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यात भने ९ प्रतिशत बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । चालू आवको ७ महीनामा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ ।
यो अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार भएको भन्सारले बताएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा आयात २ खर्ब ७७ अर्ब र निकासी व्यापार २० अर्ब रुपैयाँको भएको थियो । यो नाकाबाट चालू आवमा भटमासको प्रशोधित तेल सबैभन्दा बढी निकासी भएको छ । अघिल्लो वर्ष पाम आयल निकासी भएकोमा भारतले आयात रोकेपछि यो क्षेत्रमा तेल उद्योगी भटमासको तेलमा केन्द्रित भएका छन् । बारा पर्सा कोरिडोरका १४ ओटा तेल उद्योगले निकासी गर्दै आएका छन् । सात महीनामा वीरगञ्जबाट साढे २२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा त्योमध्ये भटमासको प्रशोधित तेलमात्रै १३ अर्ब रुपैयाँको छ । यो निर्यात अघिल्लो आवको ७ महीनाको तुलनामा मूल्यका आधारमा २३९ प्रतिशत बढी हो ।
यो नाकाबाट जुसजाम, कपडा, दन्तमञ्जन, जुत्ता, पिना र उनी गलैंचा पनि निर्यात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल, आयुर्वेदिक औषधि, स्टीलका भाँडालगायत वस्तु पनि निकासी सूचीको प्रमुख स्थानमा परेको अधिकृत सुकमनीले बताए ।